“Xisbi ahaan Kuma Jirto Ajandahayaga in aanu Shir-beeleed dadka ku celino” | Salaan Media
“Xisbi ahaan Kuma Jirto Ajandahayaga in aanu Shir-beeleed dadka ku celino”
May 7, 2013 | Published by: admin
Hargeysa (SM)-Murashaxa Madaxweynaha ee Xisbiga mucaaridka ah ee UCID Mudane Jamaal Cali Xuseen, ayaa difaacay shirkii uu dhawaan ku baaqay Guddoomiyaha xisbiga UCID, waxaanu ku dooday inaanu ahayn shir beeleed.
Sidaasna Jamaal waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed uu galabta soo saaray , isagoo ku sugan dalka Maraykanka, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Bismilaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan beryahan u danbeeyay saxaafadda ku arkaayey iyaddoo Xisbiggii UCID lagu eedaynaayey inay waddaan shir wadatashi ah oo laga soo gudbay maadaama dimuqraadiyad uu dalku u talaabsaday.
Wada tashigu waa wax wanaagsan laakiin waxaan filayaa arrinka uu Gudoomiyahaygu yidhi wuxuu salka ku hayey uun wadatashigii qaran ee ay hore dawladda Somaliland ugu dhawaaqday xilligii shirkii wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland.
Sidaa darteed, xisbi ahaan kuma jirto ajandahayaga in aanu shirbeeleed dadka ku celino, islamarkaana Aniga iyo Musharaxa M/W/Xigeenka xisbiga UCID aqoonyahan Abdirashid Hassan Mataan ba uma aragno in shir noocaas oo kale ahi uu noqdo mid aanu is nidhaahno ku wajaha siyaasadda xisbigga oo shacabka Somaliland ku kasbadda.
Waxaan u sheegayaa ummadda Somaliland xisbigga UCID mar walba daryeelka ummadda Somaliland ayuu u taagan yahay iyo in uu ummadda walaalaha isu soo dhaweeyo. Xisbigayagu wuxuu dhowrayaa shuruucda waddanka u taalla, Ummadda Somalilandna waxay talladda u dhiibatay xukuumadda haatan jirta, anagana dastuuri ahaan waxaay ummaddu noo igmatay inaanu ku ilaalino oo wixii dhalliilo ah ee jira aanu ummadda u sheegno, wixii danta qaranka ah ee aanu ka taageeri karnana sida shirkii Turkiga oo uu gudoomiyahaygu raacay in aanu ku taageerno maadaama ay tahay dan caam ah oo Qaranka lagu horumarinaayo. Way jiraan cabashooyin farobadan oo ka soo yeedhaya deegaano badan oo Somaliland ah oo u baahan in xukuumadu tixgeliso kuwaasi iyo arrimo kale sida arrimahii muddo kordhinta golayaasha sharci dejinta oo u baahnaa in talo wadaag ay layeelato xisbiyada qaranka, dhammaantood waa arrimo badan oo u huursan xukuumadda talladda haysa xisbi ahaana aanu ku dhiirigelinayno inay xukuumaddu wax ka qabato sidda ugu dhakhsaha badan. Somaliland wada tashi iyo kala danbeeyn bay ku soo caano maashay waana inagu wadda waajib in aynu ilaashano midnimaddeena Qaran lana dhowro sharcigii dalka u yaalay.”